Homeတူရကီတူရကီ Aegean ကမ်းခြေ35 Izmirသူငယ်တန်းကနေကျောင်းသားများသည် sensitivity ကို izban ခေါ်ရန်
28 / 08 / 2019 Levent Elmastaş 35 Izmir, ခရီးသည်ရထား, ရထားလမ်း, တူရကီ Aegean ကမ်းခြေ, PHOTOS, အထွေထွေ, မြို့ပြရထားစနစ်များ, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ 0
အဆိုပါသူငယ်တန်းကျောင်းသားအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း cagrisi sensitivity ကို izbe
မိမိတို့အမြင်အာရုံပြင်ဆင်ထားရန်ချင်ပါတယ်ဘယ်လောက် izban တစ်ဦးသဘောသဘာဝကိုစီးဖို့အကြီးတင်းကိုကြားပြောသော Izmir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်သူငယ်တန်းကျောင်းသားကျောင်းသူများ Izel ယောက်ျားသည်။
Izmir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ် Izel bearing သူငယ်တန်းကျောင်းသားကျောင်းသူများသဘာဝမှအထိခိုက်မခံဖြစ်ခေါ်ဆိုမှုကို လုပ်. , izban'l မှခရီးသွားခရီးသည်တစ်ဦးအံ့အားသင့်စေခဲ့သည်။ သြဂုတ်လအတွင်းက Izmir ကြေး Soyer ရဲ့Efemçukuruအတွက်တထောင်530 အကြောင်းကိုဟက်တာ၏ပြာများဖြစ်ပေါ်ရသော Izmir တဲ့ Metropolitan မြို့တော်ဝန်မီးလောင်မှုမှသူငယ်တန်းကျောင်းသားကျောင်းသူများDevedüzနေရာဒေသအတွက်အစည်းအဝေးခေါ်ခြင်းထောက်ခံမှုကိုပေး၏။
အများပြည်သူပိုမိုသိရှိနားလည်လာစေရန်စည်းရုံးအဆိုပါဖြစ်ရပ်, ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးအောက်မှာ-ငါးခုအသက်အရွယ်အုပ်စုသည်ကျောင်းသားများကို။ ကလေးများ "မတ်ေတာ၏သစ်ပင်" နှင့် "သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအသိပညာ" နှင့်သူတို့ဆောင်ပုဒ်ကိုပွငျဆငျပုံပြင်များ၏ "သဘာဝ" သူတို့မှာလည်း izban အတွက်ခရီးသွားလာခရီးသည်နှင့်အတူမျှဝေပတ်ဝန်းကျင်ချင်ပါတယ်ဘယ်လောက်ရှင်းပြကျောင်းသားများ, သူတို့ရဲ့အကွီးအကဲမြားမှဖြစ်ရပ်များကျင်းပလိမ့်မည်သည့် 30 သောကြာနေ့သြဂုတ်လမှ Izmir ရဲ့သစ်တောတွေ, Self-လုပ် သူတို့ဘရိုရှာကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။
Izel Erkeçသဘာဝတရားငွေကြေးခြောက်လနှစ်အရွယ်သူငယ်တန်းကျောင်းသား, "ကျနော်တို့ကိုထိန်းသိမ်းသစ်တောဆိုင်ရာစာအုပ်များစသစ်တောပြင်ဆင်ကြပြီ, ငါတို့ရှိသမျှသည်စက်ရုံတစ်ဦးဘဝကိုရှိပြီးလူတိုင်း 30 ပျိုးပင်သြဂုတ်လအတွင်းစိုက်ပျိုးရန်မျှော်လင့်ထားသီချင်းစာသားရေးသားခဲ့သည်," ဟု၎င်းကပြောသည်။ "ငါတို့သည်ငါတို့၏သားသမီးများ၏အနာဂတ်ကာကွယ်ပေးရန်ရှိသည်နှင့်ကျွန်တော်လူမှုရေးအသိအမြင်တိုးမြှင့်ဖို့ရှိသည်အတိုင်းဤအသိအမြင်အတွက်ငါတို့သားသမီးရှိအောင်ရပါမယ်" ဟု Izel ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ In-အိမ်သူအိမ်သားမူလတန်းကျောင်း၌ဤလေ့လာမှုနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ဝိညာဏ်များအတွက်အလွန်သေးငယ်သောကျောင်းသားများကိုတာဝန်နှစ်ခုလုံးကို upgrade ဖို့ ", အထွေထွေမန်နေဂျာ Burak Alba Ersan ငွေကြေးကဆိုသည်အဖြစ်ကိုလူများသူတို့ # izmirküllerindendogအတွက်တိုးမြှင့်အသိအမြင်ရောက်ရှိ ကျနော်တို့ကမ်ပိန်းကိုထောကျပံ့ဖို့သူတို့ကိုမေးသော်, "ဟု၎င်းကပြောသည်။
Metro High School တွင်ကျောင်းသားများအနေဖြင့်စာအုပ်ဖတ်ရှုရန်ကင်ပိန်း 25 / 03 / 2015 စာဖတ်ခြင်းကင်ပိန်းအတွက် Metro High School တွင်ကျောင်းသားများ: Adana အတွက်အထက်တန်းကျောင်းကျောင်းသားများကိုစာဖတ်ခြင်းစာအုပ်များ၏အရေးပါမှုကိုအလေးပေးနိုင်ရန်အတွက်စာအုပ်ဖတ်နေမြေအောက်ရထားပေါ်တွင်ခရီးတလျှောက်လုံးဖြစ်ရပ်များစည်းရုံး။ Seyhan Adana ISE Anatolian High School တွင်ဆရာ, ဆရာမများ, ကျောင်းသားများနှင့်မိဘများကစာအုပ်တွေကိုဖတ်နေအားဖြင့်ခရီးသည် '' ကိုဖတ်ရထားလမ်းမာစတာ eject စီမံကိန်း '' ပြင်ဆင်ထားခရီးသွားသည့်အခါကြောင်းသေချာစေရန်မြေအောက်ရထားပေါ်တွင်စာအုပ်တွေဖတ်နေ၏အရေးပါမှုကိုအလေးပေးရန်။ ဤအခြေအနေတွင်ယင်း437 ဆရာနှင့်ကျောင်းသားတက်ရောက်သူများတွင်မတ်လသည်အထိ 27, သင်တို့သည်ငါတို့၏ပထမဦးဆုံးရပ်တန့်ပြန်မှီတိုင်အောင်စာဖတ်ခြင်းလှုပ်ရှားမှုဖျော်ဖြေဖို့နေ့တိုင်းမြေအောက်ရထားပေါ်တွင်ပထမဦးဆုံးမှတ်တိုင်ကနေစတင်။ အဆိုပါစီမံကိန်းအား '' စီမံကိန်းဖော်ပြအဖြစ် ", ကျောင်းတာဝန်ရှိသူများဤပြဿနာတစ်ခုအသိအမြင်နိုးဖို့ရည်ရွယ်ထား ...
တက္ကသိုလ်စီးတီးခေါင်းစဉ်ကနေ Plus အားအဆိုပါ Izmir တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား 29 / 07 / 2018 Izmir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, AAA အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအကြွေး rating အေဂျင်စီ၏အောင်မြင်မှုကိုညွှန်ပြမှတ်စုကို ယူ. , ကောလိပ်ကျောင်းသားများ + မှဤအချိန်မှတ်စုများကိုယူ။ ပြည်နယ် 81 ဓာတ်ခွဲခန်း "ကျောင်းသား-Friendly မြို့ကြီးများ" စစ်တမ်းများတွင်တက္ကသိုလ်ကကောက်ယူသုတေသန Izmir, ကျောင်းသားများအဆင့်မြင့်မျှော်မှန်းချက် "Plus အား" အဆင့်ကိုအကဲဖြတ်ခဲ့သည်တွေ့ဆုံရန်။ တက္ကသိုလ်သုတေသနဓာတ်ခွဲခန်း (Unior) တူရကီအတွက်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအားဖြင့်ဖန်ဆင်းတော်နှင့် "တူရကီတက္ကသိုလ်ကျေနပ်မှုစစ်တမ်းဖို့" တက္ကသိုလ်အတွေ့အကြုံအပေါ်ကျယ်ပြန့်ရှုထောင့်ကမ်းလှမ်း (Tuma) Izmir မှတ်သားခဲ့သည်။ Izmir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်အတွက် Izmir အတွက်သိသာထင်ရှားသောသြဇာလွှမ်းမိုးမှုနှင့်အတူလျှောက်လွှာဖို့လမ်းကြောင်း "တက္ကသိုလ်၌တည်ရှိ၏" ပြည်နယ်အတွင်းရှိ 81 တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ (Odusan) ကိုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသား-Friendly မြို့ကြီးများသို့တက်ရောက်ခြင်းဖြင့် ...
İZBANန်ထမ်းကနေလျှပ်စစ်နဲ့ကြော်ငြာတွေကိုKocaoğlu'nunခေါ်ရန် Posted 20 / 02 / 2014 İZBANန်ထမ်းများနှင့်Kocaoğlu'nunကနေလျှပ်စစ်ပြက်သောကြော်ငြာခေါ်ရန် posted: Izmir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်နှင့် TCDD မိတ်ဖက်ကုမ္ပဏီများသည် Izmir ခရီးသွားလက်မှတ်စနစ်, Inc (İZBAN) ဝန်ထမ်း Union န်ထမ်းများ, သူတို့ကခံယူနိမ့်လုပ်အားခမှအဖြေတစ်ခုအဘို့အသတင်းစာများအတွက်ကြော်ငြာတွေကိုပေး၏။ မြို့တော်မြို့တော်ဝန် Aziz က Kocaoglu CHP နှင့် AK ပါတီ Izmir မြို့တော်ဝန်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း Binali Yildirim ကသူ့အာရုံကိုဆွဲငင်ဖို့İZBANန်ထမ်း, သူသည်ဖြေရှင်းနည်းချင်တယ်။ တူရကီပြည်နယ်မီးရထားနှင့်İzmirတဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ် 50 ရာခိုင်နှုန်းသာဘုံİZBAN Inc ကဖြစ်ပါတယ် Post-ပဋိပက္ခအကျပ်အတည်းအပေါ်စုပေါင်းညှိနှိုင်းသဘောတူညီချက်ထဲမှာစတင်များတွင်ဖုံးအုပ်နှင့်မေလတွင် 197 Union န်ထမ်းမောင်းနှင်မှု, ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုပညာရှင်များနှင့်ဘူတာရုံတာဝန်ရှိသူများအားဖြင့် operated အဆိုပါ 2012 ခရီးသည်အညီ ...
သပိတ်ပေါ်İZBANလုပ်သားများပံ့ပိုးမှုခေါ်ရန် 27 / 10 / 2016 İZBANအလုပ်သမားများ၏ Greve ပံ့ပိုးမှုခေါ်ရန်: မီးရထားİZBAN-စီးပွားရေးသဘောတူညီချက်စုပေါင်းညှိနှိုင်းသဘောတူညီချက်ဖြစ်စဉ်ကိုအောင်မြင်နဲ့ဒဏ်ခတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုစာဖြင့်ရေးသားရှင်းပြချက်ကိုဖန်ဆင်းမရနိုင်, ပြည်ထောင်စုအတွင်းရှိလုပ်သားများစည်းရုံး။ အလုပျသမား '' သပိတ်အခြားရွေးချယ်စရာမရှိပါအတွက် izban စုပေါင်းသဘောတူညီချက်စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုများတွင်သဘောတူညီခဲ့မရနိုင်သည် "ဟုသူကပြောသည်။ သပိတ်İZBANလုပ်သားများအပေါ်မီးရထားစုပေါင်းညှိနှိုင်းသည့်လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်-စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင်ဆင်းရဲမွဲတေမှုမျဉ်းအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောသူတို့ရဲ့လုပ်အားခသူသော့ခတ်မှသာဆွေးနွေးပွဲများငွေဖောင်းပွမှုနှုန်းကိုမြှင့်၏ကမ်းလှမ်းမှုကိုလုပ်ကဆိုသည်။ သူတို့ကအလုပ်ရှင်ရဲ့လက်ရှိလုပ်ခအဆင့်ဆင့်ယိုယွင်းနေအပေါ်အပြင်းအထန်တောင်းဆိုကြောင်းကြေညာခဲ့သည်မူကြမ်းအဆိုပြုချက်ကိုဘာ့ဂ်ကသူတို့ရဲ့အဆိုပြုချက်ချ drawing ထက်၎င်းတို့၏စုပေါင်းညှိနှိုင်းသဘောတူညီချက်ရှိနေသော်လည်းİZBANလုပ်သားများဖော်ပြန်ထမ်းများထံမှလက်ခံရရှိ Izmir Metro 33 ရာခိုင်နှုန်းခန့်ပျှမ်းမျှနိမ့်လုပ်ခလစာ။ အလုပ်ရှင်ရဲ့အလျှော့ ...
အသင်းမှ Menemen İzbanနာကျင်တုံ့ပြန်မှု။
အဆိုပါKocaoğlu'nunရန်အလုပ်သမားများအဆုံး Strike İZBAN Call
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးပွားနှင့် Boztepey Teleferik
လူ့မြို့တော် havaray ပို့ဆောင်ရေးသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မခံတဲ့ oriented လှို